Galmada naagaha buuran waxa ay u bahan tahay nin gus dheer waayo waxaa kaa reebaya cajaraha iyo hilibka. - iftineducation.com
Galmada naagaha buuran waxa ay u bahan tahay nin gus dheer waayo waxaa kaa reebaya cajaraha iyo hilibka.
iftineducation.com – Galmada naagaha buuran waxa ay u bahan tahay nin gus dheer waayo waxaa kaa reebaya cajaraha iyo hilibka.
Qaabka ugu fiican waa in ay iyada ku fariisato guska iyadoo kada loobsaneyso si dhamaan uu u galo, naagaha qaarkooda oo buuran aad bay u cayaari karaan waxay u dhaqmayaan iyagoo caata ah oo kale.
Maxaa yeelay canbarka marka bahalka laga soo bixinaayo wuu furan yahay aariyo ayuu qaadanaa kadib marka lagu celiyo guska cod oo dhuuso u eg baa ka soo yeera , naagaha aad bey ugu xishoodaan inuu maqlo ninka codkaas.
MUUQAALKA GABDHAHA :
Sidee lagu garan karaa xuubka fudud ee bikrada iyo inay gabadha bigro dhab ah tahay.
SAWIRRO : Nin weerar ku qaaday Safaaradda Mareykanka ee Nairobi oo toogasho lagu dilay